यसरी गर्न सकिन्छ गर्मीमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल ! « News of Nepal
यसरी गर्न सकिन्छ गर्मीमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल !
नेपालमा विशेषगरी चैतदेखि जेठसम्म सूर्यबाट आउने तातो किरणले नै गर्मी बनाउँछ । यो समय सुख्खा हुने तथा हावाहरी पनि चल्ने समय पनि हो । गर्मीको समयमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरु पनि बढि देखिन्छन् । जाडोमा प्रायः चिसोका कारण रुघाखोकी जस्ता समस्या देखिने भएपनि गर्मीको समयमा धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या आउँछन् ।
हामीले अनुभव गरेकै छौं, गर्मी बढेसँगै पखला लाग्छ, खानेकुरा पच्दैन, फूड प्वोइजन हुन्छ । यहिबेला हो, छालाको संक्रमणदेखि टाउको दुख्नेसम्मको समस्या हुने । गर्मीमा शरीर आलस्य हुन्छ । यस्तै झिँगाबाट फैलने रोगहरु लाग्ने, लामखुट्टेले टोक्ने, साङ्लाले दुःख दिने समय पनि गर्मीमै बढि हुन्छ ।
गर्मीयामको सबै नकारात्मक कुराहरु मात्र छैनन् । गर्मी समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ । निरन्तर चलिरहने प्राकृतिक मौसमअनुसार आफूलाई पनि अलर्ट राख्नुपर्छ । जस्तै खानेकुरा, सरसफाईं लगायत दैनिकीसम्मका क्रियाकलापहरुमा मौसम वा समयअनुसार चल्न सक्नुपर्छ ।
गर्मीयाममा स्वस्थ रहन यस्ता छन् उपायहरुः